Ethernet enweghị nhazi IP dị mma: ihe ị ga -eme? | Nzukọ mkpanaka
Ethernet enweghị nhazi IP dị mma: ihe ị ga -eme?
Kọmputa ọ bụla dị n'ụwa na -eji a Ad IP Ad (Internet Protocol) iji jikọọ na Ịntanetị. Nke a bụ adreesị eji amata ngwaọrụ n'ime netwọk. Tinyere ihe ndị ọzọ, a na -eji ya iji nkwukọrịta na ngwaọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ịntanetị. Mgbe ozi pụtara "Ethernet enweghị nhazi IP dị mma" ọ pụtara na ọ nwere ihe na -ada n'ime usoro a.
Ndabere nke nsogbu ahụ bụ na njikọ Ethernet anyị anaghị enweta adreesị IP ziri ezi site na DHCP (Protocol Configuration Protocol). Nke a bụ a protocol netwọk nke na -enye ndị sava ohere ịnye adreesị IP na kọmputa na -akpaghị aka maka otu netwọkụ. Mgbe usoro a dara, ọ gaghị ekwe omume ikenye adreesị IP dị mma na kọmputa. Nsonaazụ nke a: ngwaọrụ enweghị ike jikọọ na netwọk ma ọ bụ Ịntanetị.
na akpata ihe kpatara njehie a dị ọtụtụ ma dịkwa iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ n'ihi ọkwọ ụgbọala nkwụnye netwọkụ na -ezighi ezi ma ọ bụ ntọala netwọkụ na -ezighi ezi, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Na post a anyị ga -enyocha ihe nwere ike ịkpata ya na ụzọ nke ya dozie njehie ahụ "Ethernet enweghị nhazi IP dị mma" nke nwere ike ibute ọtụtụ isi ọwụwa.
1 Ngwọta 1: Ntọgharị ike
1.1 Malitegharịa ekwentị kọmputa
1.2 Malitegharịa ekwentị ma ọ bụ modem
2 Ngwọta 2: Gbanyụọ nhọrọ mmalite ngwa ngwa
3 Ngwọta 3: Ntọala nkwụnye netwọk
4 Ngwọta 4: Malitegharịa ekwentị TCP / IP
5 Ngwọta 5: Kpochapụ oghere netwọkụ
Ngwọta 1: Ntọgharị ike
Ngwọta nke mbụ ịnwale: Malitegharịa ekwentị na kọmputa
Nke a ga -abụ abụ akpa ngwọta na anyị niile kwesịrị ịnwale. Ọ bụghị ihe ijuanya na nsogbu ọrụ nke ngwaọrụ anyị na -apụ n'anya mgbe ịmalitegharịrị. N'ọnọdụ ọ bụla, tupu ịga n'ihu, ọ dị mma ịchekwa ọrụ niile emere ka ihe ọ bụla ghara ifu. Naanị mgbe e mesịrị, anyị na -agbanyụ kọmputa ahụ.
Nke a bụ ihe anyị kwesịrị ime:
Malitegharịa ekwentị kọmputa
Anyị na-emeghe menu Inicio site na ịpị akara ngosi Windows na taskbar.
Mgbe ahụ, na akara ngosi Gbanye, anyị pịa na nhọrọ Malitegharịa ekwentị. Mgbe ị na -eme nke a, kọmpụta ahụ ga -agbanyụ na akpaghị aka na mgbe sekọnd ole na ole ọ ga -agbanye ọzọ na -enweghị anyị ịme ihe ọ bụla.
N'ikpeazụ, anyị abanye na akaụntụ onye ọrụ anyị anyị na -ahapụkwa Windows 10 bulite ndabere.
Malitegharịa ekwentị ma ọ bụ modem
Anyị kwụpụrụ router ma ọ bụ ngwaọrụ modem anyị na -echekwa n'etiti 2 na 5 nkeji. Nke ahụ bụ obere oge akwadoro iji hụ na nrụgharị kwesịrị ekwesị.
Mgbe oge a gasịrị anyị na -ejikọ ya ọzọ wee chere ka ọ malite. Ọkụ oriọna LED dị na ngwaọrụ ahụ ga -egosi na emechala usoro mmalite.
Ọ bụrụ na ozi "Ethernet enweghị ezigbo nhazi IP" apụtaghị, anyị edoziela nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ọ na -adịgide, ọ nwere ike ịdị mkpa ịmegharị ọrụ ahụ site na iji eriri njikọ ọzọ.
Ngwọta 2: Gbanyụọ nhọrọ mmalite ngwa ngwa
Gbanyụọ nhọrọ mmalite ngwa ngwa na Windows 10
Nke a bụ ụzọ ọzọ iji dozie nsogbu nke "Ethernet enweghị nhazi IP dị mma" na kọmputa anyị. Nhọrọ nke Ngwa ngwa na -abịa na ndabara na ọtụtụ kọmputa Windows 10. Ezubere ya ikwe mgbake ngwa ngwa mgbe ezumike ma ọ bụ mechie. Mana enwere ike igbochi ya ma ọ bụrụ na ọ na -enye anyị nsogbu. Ka anyị hụ ka esi eme ya:
Mbụ anyị na-aga ihe nchọta n'aka nri ala wee dee "ogwe njikwa". Ị nwekwara ike mepee ọrụ ọchụchọ na ụzọ mkpirisi keyboard, site na ịpị igodo Windows + S.
Anyị na -ahazi ọnọdụ ngosi ka ewee gosipụta ihe njikwa Panel na obere akara ngosi. Mgbe ahụ anyị pịa "Nhọrọ ike".
Na kọlụm aka ekpe, anyị pịa njikọ ahụ «Họrọ omume nke bọtịnụ gbanye ma gbanyụọ ».
N'ebe ahụ, anyị pịa na nhọrọ "Gbanwee ntọala ndị adịghị ugbu a." Ọ nwere ike bụrụ n'oge a ka sistemụ ga -amanye anyị ịbanye paswọọdụ onye nchịkwa.
Imecha, uncheck igbe "Mee ọ rụọ ọrụ mmalite mbido ngwa ngwa (akwadoro)" na NchNhr Ntọala menu. Dị ka egosiri na foto dị n'elu. N'ụzọ dị otu a, anyị na -agbanyụ ọrụ nwere ike ibute ndọghachi azụ. Tupu ịpụ, ị ga -echekwa mgbanwe ndị a.
Ozugbo emechara ihe a niile, anyị ga -amalitegharị kọmputa wee chọpụta na edozila nsogbu ahụ.
Ngwọta 3: Ntọala nkwụnye netwọk
Ekenye adreesị IP kwụ ọtọ iji dozie nsogbu ahụ "Ethernet enweghị njehie nhazi IP dị mma".
Ọ bụrụ na ụzọ abụọ dị n'elu arụbeghị ọrụ, ọ bụ oge ịnwale onye a. Nọmalị, ihe rawụta na -akọwapụta ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ na ya na adreesị IP na -akpaghị aka. Agbanyeghị, enwere ike ịhazi ya nye naanị adreesị IP static. Na nke ahụ na-ejedebe mgbe ụfọdụ na nsogbu a na-akpọ "Ethernet enweghị ezigbo njehie nhazi IP".
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ya, ndị a bụ usoro ị ga -eso:
Iji malite, anyị na -pịa nchikota igodo Windows + R ka imepee ọrụ Run. N'ime igbe anyị na -ede iwu ahụ "Ncpa.cpl" anyị na -anabata. Site na nke a anyị ga -emepe mpio nke "Njikọ netwọkụ".
Anyị pịa aka nri "Nhazi nhazi Ethernet" ma anyị họrọ nhọrọ «Njirimara».
Na dialog "Njirimara Ethernet", anyị na-achọ "Ụdị usoro ịntanetị 4 (TCP / IPv4)" na anyị pịa ya ugboro abụọ.
N'ime igbe mepere n'okpuru, akpọrọ "Njirimara Ntanetị Ntanetị 4 (TCP / IPv4)", a ga -agbanwerịrị nhọrọ ndị a:
Nweta adreesị IP na -akpaghị aka.
Nweta adreesị ihe nkesa DNS na -akpaghị aka.
Na tiori, nke a ga -ezu iji dozie nsogbu ahụ. Mana ọ bụrụ na ọ daa, akụkụ ikpeazụ nke usoro a ga -agbanwe, nke metụtara faịlụ nhazi akwụkwọ ntuziaka nke adreesị IP na DNS.
N'ezie, anyị ga -emerịrị usoro ndị a kpọtụrụ aha n'elu, mana na nke ikpeazụ, nke dị na igbe “Njirimara Version Protocol Version, 4 (TCP / IPv4)”, anyị na -ahọrọ ma dezie nhọrọ ndị a:
Anyị na -ebu ụzọ jiri adreesị IP na -esonụ wee jupụta nkọwa na ọnụọgụ ndị a:
IP adreesị: 192.168.1.15
Ihe nkpuchi Subnet: 255.255.255.0
Ọnụ ụzọ eburupụta 192.168.1.1
Mgbe nke a gasị, anyị na -eji adreesị sava DNS ndị a wee jupụta nọmba ndị a (nke bụ Ntọala DNS Google):
Ihe nkesa DNS ahọrọla: 8.8.8.8
Ihe nkesa DNS ọzọ: 8.8.4.4
Ngwọta 4: Malitegharịa ekwentị TCP / IP
TCP / IP nrụpụta
Isi ihe dị na usoro a bụ iji netsh iwu, nke na -enye anyị ohere ịlele ma gbanwee nhazi netwọkụ nke kọmpụta anyị. Ọ bụ otu a ka ọ si arụ ọrụ:
Anyị na-amalite site na iji nchikota igodo ama ama Windows + S imeghe ebe ichota.
Mgbe ahụ anyị pịa aka nri "Mee ka onye nchịkwa" imepe iwu ozugbo (iwu ọsọ ọsọ). Anyị na -akwado ya "Inabata". O nwere ike ịbụ na n'oge a Njikwa akaụntụ onye ọrụ. N'okwu ahụ, anyị na -pịa "Ee" iji nye ohere ka ngwa mee mgbanwe na ngwaọrụ anyị.
Ugbua n'ime iwu ozugbo, anyị na -ede ihe ndị a iwu eriri, na ịpị Tinye mgbe onye ọ bụla n'ime ha wee gbuo ya:
tọgharịa netsh int IP nrụpụta
Mgbe anyị mere iwu nke mbụ, anyị ga -enweta ozi na -arịọ anyị ka anyị malitegharịa kọmputa ahụ. Ị ga -eleghara ya anya.
Ugbu a ee, ka emechara iwu abụọ ahụ nke ọma, oge eruola Malitegharịa ekwentị ahụ wee chọpụta na emechaala nsogbu ahụ na ozi ahụ "Ethernet enweghị ezigbo nhazi IP" egosighizi.
Ngwọta 5: Kpochapụ oghere netwọkụ
Kpochapụ oghere netwọkụ iji dozie nsogbu "Ethernet enweghị ezigbo nhazi IP"
N'ikpeazụ, usoro ọzọ iji nwaa idozi otu ugboro na nhazi IP niile na -adịghị mma maka Ethernet na kọmputa anyị. Ihe dị mfe dịka ikpochapụ oghere netwọkụ. Iji mezuo nke a, ọ ga -adị mkpa iji eriri iwu ipconfig na mpio ojii nke ngwa ngwa iwu.
Iwu a nwere ikike igosi anyị nhazi ugbu a nke IP arụnyere. Ojiji ya na -enye gị ohere ịtọgharịa ọdịnaya nke ihe nkesa DNS onye ahịa ma mee ka nhazi DHCP nwee ume. Ndị a bụ usoro ị ga -eso iji mezue usoro a:
Anyị na-ede "Akara nke usoro" na ụlọ ọchụchọ dị na ala aka ekpe ihuenyo ahụ. Anyị nwekwara ike iji ụzọ ọzọ site na igodo Windows + S imeghe ebe ichota.
Mgbe ahụ anyị pịa "Mee ka onye nchịkwa" imepe iwu ozugbo. A ga -arịọ anyị ka anyị gaa n'ihu, nke anyị ga -enye site na ịpị "Ịnakwere".
Na -esote, na mpio ojii, iwu dị elu, anyị na -ede iwu ndị a:
ipconfig / hapụ
N'ikpeazụ ipconfig / eme
Mgbe iwu ọ bụla gachara, ị ga -pịa Tinye ka ịmechaa nke ọ bụla. Mgbe ịmechara iwu atọ ahụ, naanị ihe ga -eme bụ ịmalitegharị kọmputa ahụ wee chọpụta na edozila njehie ahụ.
Ruo ugbu a ndepụta anyị nke ngwọta. Anyị nwere olile anya na ụfọdụ n'ime ha enyerela gị aka idozi nsogbu ahụ n'ụzọ na -eju afọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime aghụghọ ndị a abụchaghị ezigbo ngwọta, ọ kacha mma ịza onye na -ahụ maka ịntanetị gị ajụjụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Ethernet enweghị nhazi IP dị mma: ihe ị ga -eme?
Nhọrọ 10 n'efu maka Okwu maka Mac
Kedu ka ị ga -esi budata usoro efu na Telegram